Matongerwo eNyika, 22 Kurume 2018
China 22 Kurume 2018
Bere Anonyimwa Mukana weKubvisa Mari yeChibatiso Dare Richityira Kuti Anotiza
Mutongi wedare reChiredzi, Amai Geraldine Mutsoto, vati havagoni kupa Bere mukana wekuti agare kumba kwake akamirira kudzoserwa kuAmerica, sezvo aine nhoroondo yekutiza sezvaakaita kuAmerica mushure mekusungwa.
Ambassador Thomas Vanoonekana neVatori veNhau
Mumiriri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Harry Thomas Jnr, avo vave kusiya basa, vanoti vanosuwa chose kuti vave kubuda muZimbabwe nyika isati yaita sarudzo dzakachena.
Hurumunde Yovimbisa Kugadzirisa Zvichemo Zvaana Chiremba?
Hurumende inonzi yakavimbisa kugadzirisa zvichemo zvose zvavana chiremba vari kuramwa mabasa ichiti ichawedzera mari dzekubatsirikana kubva pa dhora rimwe nemakumi mashanu ema cents pa awa imwe chete, kusvika pamadhora mashanu pa awa.
VaMwonzora naVaTshuma Vopesana paNguva Yasara Kuti Sarudzo Dziitwe
Zimbabwe iri kutarisirwa kuita sarudzo dzemutungamiri wenyika, vamiriri veparamende, makanzura, pamwe nemameya, gore rino pakati pa 21 Chikunguru na21 Nyamavhuvhu, sezvakaziviswa neZimbabwe Electoral Commission, ZEC.
VaMnangagwa Voshora VaMugabe vachiti Vave Kukanganwa Zvinhu neKuchembera
Mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa nezuro vakaudza vatori venhau kuRwanda kumucheto wemusangano weAfrican Union kuti havasi kushaiswa hope nemashoko ari kutaurwa nevaive mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe ekuti vakabvuta masimba vachishandisa mauto.
ZCTU Yoramba Mashoko eKuti Iri Kutsigira Muzvare Khupe
Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, raramba mashoko ekuti riri kutsigira Muzvare Thokozani Khupe semutungamiri anofanirwa kubata matomu kusvika MDC-T yazosarudza mutungamiri anofanirwa kutora chigaro chakasiiwa namushakabvu, VaMorgan Tsvangirai, avo vaitungamira bato iri.
Vana Chiremba Vanoti Zviri Nani VaParirenyatwa Vasiye Basa
Vana chiremba vanoti vari kuenderera mberi nekuramwa mabasa sezvo hurumende iri kukundikana kugadzirisa zvichemo zvavo.
Africa Yonyorerana Chibvumirano Chekutengeserana.
Nyika dzemu Africa Union dzapeta musangano wechimbi chimbi wanga uchiitirwa mu Kigali ku Rwanda, ndokubva dzasainirana chibvumirano chekutengeserana pakati penyika idzi.
Kutengeswa kweFodya Kunotanga Varimi Vakawanda Vachifarira Mutengo Wayo